I-Yunshuiyao Centennial Tulou|Shuiyunju|Dayu Begonia|Igumbi Lombhede Omkhulu Wothando|Umbhede Omangalisayo|Igumbi Lokugeza Langasese|Ukuthatha Kuyatholakala
Zhangzhou, Fujian, i-China
Ikamelo e-indlu ye-dome ibungazwe ngu-云水谣水云居百年土楼人文客栈
I-Nanjing Tulou Shuiyunju-Humanities Inn iyi-B&B yase-Tulou esezingeni eliphezulu edalwe ubuhlakani be-Xiamen Jinshuimu Brand Creative Group.
Umzimba oyinhloko wesakhiwo yisakhiwo somhlaba esiyindilinga (i-Mujing Building) esinomlando weminyaka engaphezu kwe-200, eyakhiwa ngo-1808. Itholakala e-Huangtian Village, ikhilomitha elingu-1 ukusuka e-Yunshuiyao, indawo kazwelonke ye-5A ebabazekayo, eduze ne-World Heritage Huaiyuan Tower.
Ngo-2018, ithimba lathuthukisa futhi lalungisa, ligcina isitayela sokuqala se-tulou ngezinga elikhulu, ngaphandle kokushintsha isakhiwo esiyinhloko, ukuhlanganisa izakhi zemfashini zanamuhla, futhi umklamo wokukhanyisa muhle.
Mayelana nokunakekelwa kobuntu, sicabangela ngokugcwele izidingo zokuphila zabantu besimanje. Wonke amagumbi afakwe izindlu zokugezela ezizimele, i-air-conditioning yokufudumeza nokupholisa, kanye nokufakwa kwenethiwekhi okugcwele. . Ngasikhathi sinye, inendawo yokupaka okukhethekile, amagumbi e-yoga asekelayo, amagumbi okuzindla, izindawo zokudlela, nezindawo zokuphumula.
Ngesikhathi esifanayo, kuhlanganiswe nemiqondo ethuthukisiwe yokuphatha amahhotela, ukubulala amagciwane nsuku zonke nokususwa kothuli kuqinisekisa ukuthi izivakashi zihlala zinethezekile. (Konke kuvulekele kuphela izihambeli ezihlalayo, ezikhombisa isithunzi)
Ilungele ukuvakasha, ukuvakasha, ukwakhiwa kweqembu, izinkomfa...
Kunengadi enkulu yetiye eqhele ngamamitha ayi-100, futhi umoya uhlanzekile. Kufana nokubuyela edolobheni lakini, ukhululekile, uphephile futhi ukhululekile... Shuiyunju Humanities Inn, ikhaya lakho elingaphandle kwedolobha!
Umzimba oyinhloko wesakhiwo yisakhiwo somhlaba esiyindilinga esinomlando weminyaka engaphezu kuka-200, esakhiwa ngo-1808. Itholakala e-Huangtian Village, 1.5 km ukusuka e-Yunshuiyao, indawo kazwelonke ye-5A ebabazekayo, eduze ne-World Heritage Huaiyuan Tower. Wonke amagumbi anezindlu zokugezela ezizimele, okokushisa nokupholisa umoya, ukumbozwa kwenethiwekhi okugcwele, futhi izingubo zokulala zenziwe ngokwezifiso ngokwezindinganiso zezinkanyezi ezinhlanu. Ngasikhathi sinye, inendawo yokupaka okukhethekile, amagumbi e-yoga asekelayo, amagumbi okuzindla, izindawo zokudlela, nezindawo zokuphumula. Ngesikhathi esifanayo, kuhlanganiswe nemibono yokuphatha ethuthukisiwe, ukubulala amagciwane nsuku zonke nokususwa kothuli kuqinisekisa ukuthi izivakashi zihlala zikhululekile. Kunengadi enkulu yetiye eqhele ngamamitha ayi-100, futhi umoya uhlanzekile. Kufana nokubuyela edolobheni lakini, ukhululekile, uphephile futhi ukhululekile... Shuiyunju, ikhaya lakho elingaphandle kwedolobha!
Indlu yezihambi iseduze ne-Yunshuiyao Scenic Area, okuwukuphela kwendlela eya e-Meilin Ancient Town, Hekeng Tulou Group, kanye ne-Keling Revolutionary Zone.
U云水谣水云居百年土楼人文客栈 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Zhangzhou namaphethelo